Ngathi: I-APLUS Global Ecommerce
Iqela leengcali ezinomdla ezinezakhono ezifanelekileyo zentengiso zenza intliziyo nomphefumlo we I-Aplus kwi-Ecommerce yeHlabathi. Siyakholelwa ekudaleni indawo ye-e-Commerce ekhulayo, ukusebenza ngaphakathi, kunye nokuphumla ukunika iinkonzo ezilungileyo kubaxhasi. Sibonelela ngeeNkonzo zokuBuyiselwa kweAkhawunti yabathengisi beAmazon.
Inkampani enombono wemeko esempilweni yeshishini, iimakethi ezinokhuphiswano, kunye nehlabathi elihlala lichuma, i-e-commerce ye-Global Global yenye yeendawo zayo apho amashishini akwi-Intanethi ancedwa ukuba aqhube kakuhle. Sinikezela ngeenkonzo ezingama-360 ° kwiinkampani ze-e-Commerce. Ukusuka ekuncedeni amashishini e-Commerce aneakhawunti yomthengisi esempilweni yokufumana ukubuyiselwa kweakhawunti yabathengisi beAmazon, sinezisombululo kubo bonke. Injongo ayikokunceda kuphela amashishini ukuba aphumelele kwiimarike ezinje ngeAmazon kodwa kunye nokwenza i-niche yabo kwihlabathi le-e-commerce. Sizama ukuzisa amashishini ngokuhambelana neendlela ezandayo ezikhawulezayo zehlabathi le-e-Commerce kwaye siphonononge ngakumbi nangakumbi. Iinkonzo zethu zezona zibalaseleyo kwintengiso ezenza i-A Plus Global ibe lishishini elithembekileyo. Sineqela labantu abakhethwe ngesandla abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo kwaye banezakhono zobugcisa ezifuneka kakhulu kwintengiso. Ukunyaniseka kwabo kunye nokuzinikezela kwabo kongeza ixabiso ngakumbi kwiinkonzo, kwaye leyo yi-USP ye-A Plus Global e-Commerce. Iinkonzo zethu eziqinisekisiweyo zeyure ezingama-24 ekubuyiseleni iakhawunti yoMthengisi weAmazon ziyaziwa. Ukunyusa ukuthengisa kunye neenkonzo zokujonga impilo kufuneka zivavanywe. Ukugubungela uluhlu olubanzi lweenkonzo, sisebenza nawe kumacandelo amane abanzi:
Inkonzo yezibheno kwiAmazon -Sinceda ukuthengisa kwakhona kwiiyure ezingama-24
Impilo yeakhawunti yomthengisi-sigcina impilo yeakhawunti yakho ngaphakathi kwemida ngobuchule bethu
Inkxaso yeshishini kunye nentengiso- sikunceda ukuba ukhule, hayi kuphela ukugcina
Website kunye nophuhliso lweApp- sikunika iqonga lakho lokwenza
Sibonelela ngeenkonzo ezenzelwe wena kunye neephakeji ezifanelekileyo kwiimfuno zakho, zidityaniswe nemigaqo-nkqubo yommandla lowo. Ukulungiselela isiseko sabathengi esisasazeka kwihlabathi liphela, i-A Plus yeHlabathi ibonelela ngeenkonzo ezifuneka kakhulu njenge- "Abathengisi beAmazon Abuyiselwa kwiAkhawunti" ezifunwa yiakhawunti yakho yomthengisi ngokuzinikela, ubuchule kunye nobuchule beqela lethu.